Abiy Ahmed: “Itoobiya ka fursan Meyso in ay yeelato Nidaamka Xisbiyada Badan si ay u Nabadgasho..” | Afrikada
Abiy Ahmed: “Itoobiya ka fursan Meyso in ay yeelato Nidaamka Xisbiyada Badan si ay u Nabadgasho..”
Jul 23, 2018 - Dhiibo Aragtidaada
Afrikada, Addis Ababa: Madaxda wadanka Itoobiya ayaa ku dhawaaqay in wadankaasi xilliga haatan ah aysan ka soconeynin wax aan ka aheyn in laga wada qeybgalo siyaasadda talada dalkaasi.
Ra’iisul wasaaraha dhowaan xilka loo dhiibay Abiy Axmed ayaa yiri: “Ma heysanno wado kale oo inoo furan oo aan ka aheyn in nidaamka xisbiyada badan aynu yeelano.”
42 jirka isbedel-doonka ah ayaa Axadii shalay ku dhawaaqay ereyadan xasaasiga ah oo iyagu gilgilay qalbiyada shacabka 2-aad ee ugu tirada badan qaaradani Afrika, wadankaasi oo waayo badan uu hal xisbi oo qur ah talada heyn jirey.
Fitsum Arega oo ah la taliyaha ra’iisul wasaaraha ayaa boggiusa twitterka ku sheegay in kulan ay qaateen 50 hogaamiyeyaal qaran iyo kuwo goboleed iyo qaar ka yimid dibadaha ay ku talo bixiyeen in sharciga doorashooyinka dalkaasi isbedel lagu sameeyo.
Xisbiyada kala duwan ayaa u baahnaan doona macaahid dhaqan geliya xuquuqda aadmiga iyo xukunka sharciga ayaa uu yiri r/wasaare Axmed, sida uu twitterkiisa ku sheegay Arega.
Isbedello adduunka ka yaabiyey ayaa uu Abiy Axmed sameeyay tan iyo intii uu xafiiska qabtay bishii Abriil.
Waxaa uu xabsiga ka sii daayey hogaamiyeyaashii mucaaradka isaga oo heshiis nabadeed ka keenay soona celiyay diblumaasiyadii ka dhaxeysay Itoobiya iyo Eritrea.
Bilo ka hor Itoobiya oo ah wadan dadkiisu ka badan yihiin 100 milyan ayaa waxa ay fooda gelisay mudaharaadyo looga horyimid dowladda tani oo soo jiidatay indhaha hey’daha xuquuqda iyo kuwa UNka kadib dhimashooyin iyo xabsi dhigid dad aad u badan. Dhaqaalaha oo ahaa mid kaalin fiican kaga jira Afrika ayaa ay dhibaato soo gaartay.
Xisbiga talada haya ee Itoobiya oo isagu awooda hayey tan iyo sanadkii
1991-kii isla markaaba xisbiyo isaga hoos taga ay maamulayeen kursi kasta oo ka mid ah kuraasta baarlamaanka, ayaa ugu dambeyntoodii talada u magacaabay keenay Abiy Axmed, kadib markii r/iisul wasaarihii hore Hailemariam Desalegn uu xilka iska casilay.
Waxaa is xusuusin mudan, Abiy isagu kama soo jeedo xisbiga Xoreynta Tigreega ee ‘Tigrayan People’s Liberation Front,’ xisbigaasi oo ah xisbi ku lifaaqan xisbiga weyn ee talada haya, ahna mid talo firfircoon ku lahaa dowladnimada iyo siyaasadda Itoobiya 27-kii sano ee ugu dambeeyay.
Waxyaalaha loo awoodsiiyey tan iyo intii uu talada qabtay, Abiy Axmed, ee uu kaga yaabiyey dad badan waxaa ka mid ah isaga oo khudbadihiisa ku soo daray xiritaanadii ay talisyadii hore geysan jireen, isla markaasina uu dhanka dhaqaalaha uu furfuris ku sameeyay iyo inuu cayimay in xilliga uu fursadda talada hayo uu yahay mid waqti kooban ah.
Taariikhda dowladihii hore ayaa iyagu doorashooyinkooda lagu shuban jirey waxaana ay isugu yeeri jireen inay yihiin dimuqraadi.
Haatan isbedellada doorashooyinka ee lagu dhawaaqay ayaa ah kuwo rajo gelinaya Dalka iyadoo halkii talada xoog lagu qaban lahaa ama si hoose la isugu wareejin lahaa haatan marxaladaasi laga soo gudbay.
Dhinaca kale, Ka saaristii dhowaan liiska argagixisada laga saaray jabhadaha Oromo Liberation Front iyo jabhadda Ginbot 7 ayaa markale keeni karta fursad ay uga faa’ideysan karaan in ay hanaanka siyaasadeed dhinac soo raacaan.
Walow Dad badan ay u riyaaqeen guulaha hadana waxaa wareejinta shukaanta ee uu dalku weecanayo ay sababtay deganaanshiyo xumo. Waxaa dhowaan bomb lagu weeraray isku soo bax aad u balaaran kaasi oo 2 dilay dhaawacayna 150 qof oo kale.
Xisbiga talada haya ayaa aad u dhaleeceeyay iska horimaadyada waxaana uu ku baaqay xasillooni.